I-EditShare Isetha Izinto Zobuciko Ngonyaka Omusha Ngokukhishwa Kwe-Flow 2019 - NAB Bonisa Izindaba Nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-EditShare Isetha Izibuko Ngonyaka Omusha Ngokukhishwa kwe-Flow 2019
I-EditShare Isetha Izibuko Ngonyaka Omusha Ngokukhishwa kwe-Flow 2019
Ikhulisa ukusebenzisana kwemithombo evikelekile yamafu ngokuxhuma izakhi nezinsiza ku-Amazon S3 & Glacier, i-Backblaze ne-Microsoft Azure
Basingstoke, UK - Disemba 5, 2018 - Hlela ukwabelana, umholi wezobuchwepheshe ekugcinweni okuhlakaniphile okukhulu, i-AQC kanye nezixazululo zokuphathwa kwezindaba, namuhla umemezele i-Flow 2019, isisombululo se-media management (MAM) esenza kube lula ukwabelana ngemidiya nokusebenzisana namathuluzi okulula okuphatha ukuthengwa kwezindaba, umhlangano ukulethwa ngaphesheya kwendawo eseduzane nayo. Ukugeleza okwamanje kusekela kubathengisi bokugcina bokugcina njengalezi Avid I-ISIS / NEXIS kanye nanoma yikuphi isitoreji esabelwe SMB. Ukugeleza nakho kuxhuma ekuholeni abahlinzeki be-archive njengo-Amazon S3, Generic S3, StorageDNA kanye Masstech FlashNet.
Lokhu kukhululwa kwakamuva kuthuthukisa ukuhambisana kokugcinwa nokusekelwa okusha kwe-Amazon Glacier, I-Archiware I-P5, i-Backblaze ne-Microsoft Azure. Ukugeleza kuxhuma amachibi wesitoreji esakhiwe ukusiza ukungena kwefayili, ukulandelela izimpahla, ukusesha nokubuyisa, ukuhlelwa kwezindaba, ukuhanjiswa kwemidiya kanye nezinqubomgomo zokufuduka kanye nokulethwa kwabahleli, ababala, kanye nokudala yonke indawo.
"Ukuze uhlangabezane nesidingo, izindlu zokukhiqiza kanye nabakhiqizi bokuqukethwe kudingeka badonsa echibini elikhulu kakhulu labathengisi bezindaba futhi basebenzise ithalente nomaphi lapho bekhona futhi, uma kunesidingo, bawalethe inqubo yokudala kude. Kusukela kumbono wokukhiqiza, kuyinselele enkulu futhi yilapho ukugeleza kuxazulula iphuzu lobuhlungu. "UTara Montford, umphathi wezokuphatha EMEA at Hlela ukwabelana uyachaza, "Lokhu kukhishwa kwamuva kwe-Flow kuvula izwe lonke elisha labathengisi bokugcina, okwakukade kungenakusebenzisa isisombululo sokuphathwa kwempahla njenge-Flow. Ukwengeza kubathengisi abengeziwe bokugcina isitoreji ezifana ne-Microsoft Azure Files ne-Amazon Glacier ngenkathi kufaka phakathi amapulatifomu okugcinwa kwe-NFS, kuletha umcebo wamathuba kwi-Flow system, okwenza amaklayenti amaningi akhombise futhi ahlukanise abezindaba bawo abalulekile. "
Ukugeleza kuletha ukufaka ifayela ehlakaniphile, ukufakwa kwefa, ukucinga nokuthola kanye namathuluzi kubhulogi bezindaba, kuchaza futhi uhlanganyele kumaphrojekthi wezindaba. Ibuye ihlinzeke ngamathuluzi wokuklama okuzenzakalelayo nokusebenza komsebenzi ukuze kulungiselelwe izinqubo eziyinkimbinkimbi ezifana nokudluliswa kwemidiya yokudlulisa nokudlulisa phambili okubandakanya okuqukethwe okuhambayo kusuka ekukhiqizeni kuya enqabeni ukuze kugcinwe izikhala zokugcina.
Amandla amasha ku-Flow 2019 afaka:
Ukwesekwa kokugcinwa kwesitoreji ne-Amazon Glacier, i-Backblaze ne-Microsoft Azure Files enika amandla okuguquguquka okukhulu ngokwezinga lokukhiqiza izinsiza kanye nevolumu yokuqukethwe.
I-Amazon Glacier ivumela abasebenzisi ukuba baqophe ku-archive futhi babuyisele kusuka ku-Amazon Glacier vaults.
Ukubuyisa emuva i-b2 kuvumela abasebenzisi ukuthi balondoloze okuqukethwe kwabo ezindaweni zokugcina idatha eziphephile.
I-Microsoft Azure Files ukwesekwa kwefu kwenza i-backup nokugcina ingobo yomlando kwifu le-Microsoft. Ukugeleza kungabonisa futhi imithombo ekhona.
Ukusekela I-Archiware I-P5 evumela ukugcinwa kwe-archive nokubuyisela ku-LTO kanye namanye amafu asekelwayo.
Ukuxhaswa kwevidiyo nomsindo we-codec.
Ukusekela esimweni esihle se-KVM imvelo.
Ukusekela izixazululo zesitoreji sabantu abasebenzisa i-NFS. Izithuthukisi ezintsha zokuhamba komsebenzi ziqala kusukela kuphaneli entsha yokuvuselela imethadatha kuya ekuphenyweni okusheshayo, ukuhlelwa kwesikhathi esithuthukisiwe nokuthuthukiswa kokushintshaniswa nge-NLE ehamba phambili njenge-Adobe Premiere Pro, Media Composer Ultimate and Final Cut Pro X
Amanani okugeleza nokutholakala
Hlela ukwabelana Ukugeleza kuyatholakala namuhla kumaphakheji amathathu: Okuyisisekelo, Okuthuthukisiwe ne-Enterprise. Amanani wemali ayatholakala. Abasebenzisi bangakwazi ukuhlola-drive Ukugeleza ngokulanda isilingo samahhala se-14 ngosuku: my.editshare.com.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, vakashela flow.editshare.com noma sicela uthinte [Email protected].
Mayelana Hlela ukwabelana
Hlela ukwabelana ungumholi wezobuchwepheshe ku-isitoreji esabelwe ngokuhlanganyela futhi angaphenduli, izixazululo zokuhamba komsebenzi wokuphela kokuphela kokukhiqiza okuthunyelwe, i-TV, namafilimu. Imikhiqizo yethu yokuphulwa komhlabathi yenza ngcono ukusebenzisana nokusebenzisana komsebenzi zonke izinyathelo zendlela. Zibandakanya ukuthuthwa kwevidyo nama-playout amaseva, isitoreji esiphakathi esabelwe esiteshini esiphakathi, ukugcinwa kokugcinwa kwesofthiwe kanye nesofthiwe yokulondoloza, ukuphathwa kwempahla yemidiya, kanye ne-Lightworks - uhlelo lokuqala lwe-3-platform (Windows / OS X / Linux) yomsebenzi wokuhlela ividiyo ongavamile.
© 2018 Hlela ukwabelana LLC. Wonke amalungelo agodliwe. Hlela ukwabelana uphawu lokuhweba olubhalisiwe Hlela ukwabelana.
Avid Hlela ukwabelana flow ukugeleza kwe-2019 ukuhamba kwamam ukuphathwa kwempahla yemidiya Ama-spears nama-Arrows I-Ultra HD Forum	2018-12-05
Ngaphambilini: IYunivesithi yaseLouisville Ikhetha Isixazululo Sokuthunyelwa Kwamabonakude Okuthuthukisiwe kaGrass Valley Ngaphambili kwe-ACC Network Launch
Olandelayo: I-Intern-Production Intern